मनै लोभ्याउने रुपाकोट रिसोर्टः भीआईपीको पहिलो रोजाइ, एक रात बस्न कति खर्च लाग्छ ? « Clickmandu
प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०७६, मंगलवार १८:१४
पोखरा । पोखरा प्राकृतिक सुन्दरताको पर्यायवाची हो । ८ वटा सुन्दर ताल, वरिपरी सुन्दर पहाड र माछापुच्छ्रे हिमालको काखैमा रहेको पोखरा, नेपाली मात्रै होइन विदेशीका लागि पनि पहिलो रोजाइको सहर हो ।
खुला आकाशमा देखिने प्याराग्लाइडरको ताँती, लेकसाइडको रंगिविरंगी माहोल बयान गरिसाध्य छैन । पोखराको यही सुन्दरताको उपमालाई सहयोगी बनेको छ, पोखराको शिरानमा रहेको रुपाकोट रिसार्ट ।
पोखराबाट ४५ मिनेटको उकालोमा गाडी गुडेपछि रुपाकोट पुगिन्छ । रुपा र बेगनास तालको ठ्याक्कै माथिपट्टीको हरियो डाँडामा एकनासले बिराजमान रुपाकोट रिसोर्टबाट हिँउले सेताम्मे हिमालको लामो रेञ्ज देखिन्छ । ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ३ वटा हिमाललाई आँखै अगाडि देख्न पाउँदा जो कोही मन पग्लिन्छ । प्रकृतिले पगालेको मनबाट फुक्त निस्कन्छ- आहा ! फिलिङ हेभन !
बेल्जियममा रेस्टुराँ व्यवसाय गर्दै आएका रुपाकोटका पुष्पराज अधिकारीले स्वदेश फर्किएर २०० रोपनी जग्गामा रिसोर्ट स्थापना गरेका हुन् ।
ब्रसेल्सको व्यस्त सहरको चम्कँदो व्यवसाय चलाइरहँदा पनि रुपाकोटको सौन्दर्यले सताइरहेपछि अधिकारी आफ्नै गाउँ फर्किएर रिसोर्ट बनाउन कम्मर कसेँ ।
६० रोपनी क्षेत्रफलमा रिसोर्टमा चिटिक्क र आकर्षक घरहरु छन् । क्याफेटेरिया, गार्डेन र स्वीमिङ पुलले सुन्दरतामा जलप लगाइ दिएका छन् ।
ढुंगाले छापेको बाटोमा कागती, मेवा, आँपलगायतका फलका बोटले स्वागत गरिरहेका छन् । बाटो छेउछाउ फुलेका रंगिचंगी फुलले ग्राहकलाई सुगन्ध छरिरहेका छन् । लहरै उभिएका हिमालको रेञ्ज, ठ्याक्कै मुनी २ वटा ताल मुस्कुराइरहेका छन् । हिमालको छायाँ रुपा र वेगनास तालको पानीमा माछासँगै पौडी खेलिरहेका हुन्छन् । एउटै कुर्सीमा बसेर हेर्न पाउँदा, आहा गज्जव दृश्य लाग्छ ।
आफू जन्मेको ठाउँ भए पनि जीवनको अधिकांश समय चितवन र विदेशमा बिताएका अधिकारीलाई जीवनको ५ दशकपछि सायद प्रकृतिको यही अनुमप दृश्यले लोभ्यायो । र, बेल्जियमको सानदार रहनसहनलाई चटक्कै छाडेर स-परिवार यहाँसम्म ल्यायो ।
‘बेल्जियममा होटल व्यवसाय थियो, जीवन राम्रो थियो, परिवारका लागि जुनसुकै प्याकेजमा कुनै पनि देश घुम्ने रहर पूरा हुन्थ्यो, महंगा कार थिए जीवन सुखमय थियो’ रिसोर्टका सञ्चालक अधिकारीले क्लिकमाण्डूलाई सुनाए ।
२००१ तिर नेपाल आएका बेलामा उनी आफू जन्मिएको रुपाकोट आएका थिए । सानो छँदा देखेको यी पहाड उनलाई नौलो लाग्दैनथ्यो, हरेक समय यही हेर्दा यसको महत्व बुझ्ने सायद उमेर पनि थिएन ।
‘तर जीवनको कठीन समय विदेशमा बिताएपछि यहाँको रुपले मलाई लोभ्यायो । र, रुपाकोटको रुपलाई व्यवसायमा बदल्ने मनमनै अठोट गरेँ,’ उनले सुनाए ।
सुरुवाती दिन सम्झँदै उनले बाहिरियाको कुरा धेरै सुनेनन् । ‘कतिपयले मलाई भन्थे यसले अर्को फुलबारी रिसोर्ट बनाउने भयो, विदेशमा कमाएको पैसा यहाँ डुबाउने भयो भन्थे, यतिसम्मकि बैंकले समेत लोनका लागि पत्याउँदैनथे’ उनले भने ।
२ छोरा र एक छोरी साथमा श्रीमतिका लागि बेल्जियम छाडेर नेपाल फर्कने निर्णय स्वभावतः उती रुचिकर थिएन होला । तर मेरो सपनालाई साकार बनाउनमा उनीहरुले साथ दिए । आज रुपाकोटको रुपले सबैले लोभ्याएको छ । हरेक दिन सयौं मानिसहरु यही रुप नियाल्न पोखराबाट उकालो लाग्छन् ।
सानो छँदा कागजका प्लेन बनाएर उडाएको त्यही रुपाकोटको डाँडोमा अहिले अधिकारीले १ अर्ब लगानी गरेका छन् । र, एउटा सपना सजाएका छन्, रुपाकोटको रुप बेचेर पर्यटनमा सहयोग गरौं, राम्रो आम्दानी गरौं ।
‘यो त्यत्तिकै खेर फाल्ने वस्तु होइन, विश्वमा कतै पनि यती राम्रो भौगोलिक बनावट भएको पाइँदैन, त्यसैले जो कोही विदेशीले समेत यसका लागि पैसा तिर्नैपर्छ । यो निःशुल्क पाइने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘खाडी मुलुकमा सबै कृतिम छ, अन्य देशमा पनि जवरजस्ती बनाइरहेका छन् । अधिकांश देशमा मानव निर्मित संरचनाले पर्यटक आकर्षित गरिरहेका छन् । तर हाम्रोमा प्रकृतिको सुन्दर उपहारलाई हामी उपयोग गर्नै सकेका छैनौं ।’
२०० रोपनीमध्ये १४० रोपनी क्षेत्रफल अझैं बाँकी छ । जहाँ अधिकारी अग्र्यानिक तरकारी पनि उब्जाउँदै छन् । सोही क्षेत्रफलमा भैसी पनि पालेका छन् । रिसोर्टका पाहुनाले आफैंले उब्जाएको ताजा तरकारी र दुधको स्वाद लिन पनि पाउँछन् ।
रिसोर्टले पर्यटनमा मात्रै सहयोग गरेको छैन, यसले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्नमा र स्थानीय विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । अधिकारीले आफ्नै सक्रियतामा पिच बाटो बनाएका छन् । झण्डै ९० जना काम गर्ने रिसोर्टमा ४० जनाभन्दा बढी स्थानीयले काम गरिरहेका छन् ।
गाइपालन र तरकारी खेतीका लागि १२ जनाको टोली छुट्याइदिएका छन् । रिसोर्ट आएपछि स्थानीयको जीवनस्तर केही मात्रामा उकासिएको छ ।
आर्थिक रुपमा स्थानीयहरु सबल हुँदैछन् । विभिन्न नयाँ प्रोजेक्ट गर्न स्थानीयहरु योजना बनाइरहेका छन् । र, सबैभन्दा राम्रो रुपाकोट रिसोर्टले ‘रुपाकोट’ चिनाइरहेको छ ।
रिसोर्टमा ४२ वटा वातानुकुलित कोठा छन् । रिसोर्टमा नयाँ २ वटा भवन भनिरहेका छन् । साथै रिसोर्टको तलपट्टी नयाँ स–साना भवन पनि बन्दैछन् । नयाँ बन्ने २ वटा भवनमा स्वीट रुप सञ्चालन ल्याइने अधिकारीले बताए ।
सन् २०१२ मा निर्माण थालिएको यो रिसोर्टका १२ वटा भवन छन् । अहिले मुख्य भवन, पार्किङ, स्वीमिङ पुल, गार्डेन र दुईवटा हेलिप्याड छन् ।
पैसावाल र प्राकृतिक सुन्दरताका पारखीहरुलाई लक्षित गरेर रिसोर्ट निर्माण गरिएको सञ्चालक अधिकारीको भनाइ छ । रुपाकोटसँग बेलायतका राजकुमारले पैदल हिँडेको इतिहास पनि छ ।
त्यतिमात्रै होइन, रुपाकोट रिसोर्टबाट प्रकृतिको रुप नियाल्न भीआईपीको समेत आगमन बढीरहेको छ । क्लिकमाण्डूको टोली रुपाकोर्ट रिसोर्टमा पुग्दा पुर्वयुवराज पारस शाह रिफ्रेसमेन्टका लागि पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि, प्रचण्ड लगायत अधिकांश भीआइपीहरु यो रिसोर्ट पुगिसकेका छन् । नेपालका सायदै कम भीआईपी होलान जो रुपाकोटबाट प्रकृतिको अनुपम सुन्दरता ननियालेको होस् ।
रिसोर्टबाट रुपा र बेगनास हेर्न, हिमालको चिसो हावा खान र हरियाली नियाल्नका लागि पोखराबाट हरेक दिन सयौंको संख्यामा आन्तरिक पर्यटक पुग्छन् । त्यहाँबाट प्रकृतिको सुन्दरता हेर्छन्, केही मीठा परिकार खान्छन र फर्कन्छन् ।
रिसोर्ट बनाउनका लागि यही रुपाकोट छान्नुको कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘मैले पोखराको बजारमै पनि शानदार रिसोर्ट वा होटल बनाउन सक्थे, तर मलाई उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु थिएन, आफ्नै युनिकनेस चाहिएको थियो ।’
‘पोखरामा बनाएको भए मैले त्यहीँका होटलसँग प्रतिपर्धा गर्नुपथ्र्यो तर यहाँ छैन, प्रतिष्पर्धा म आफैसँग छ । यतिसम्म कि पोखराका होटल मालिकहरु पनि घुम्न र बस्न यहाँ आउँछन्’ उनले सुनाए ।
रिसोर्ट बनाउने निर्णय गरेदेखि आजका दिनसम्म जे जति दुःख र सुखका दिन भोगे त्यसलाई समीक्षा गर्दा मैले जे गरेँ असाध्यै राम्रो काम गरे भन्ने लाग्छ, यदी अरुको कुरा सुनेर यहाँ लगानी नगरेको भए मलाई पश्चताप हुने थियो भन्ने आजका दिनमा लाग्छ ।
सुर्योदय र सुर्यास्त मन पराउनेका लागि पनि यो रिसोर्ट सबैभन्दा राम्रो गन्तव्य हो । जहाँ रिसोर्टको एउटै कुर्सीमा बसेर सनराइज र सनसेट दुबै हेर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, बायोडाइभर्सिटीका लागि पनि यो राम्रो ठाउँ हो । रुपाकोटमा गुँरास र गुलाफ एकै ठाउँ फुल्छन्, आँप र सुन्तलासँगै फल्छन, साल र सल्लोका अग्ला रुखले एकैसाथ शितलता दिन्छन् ।
रिसोर्टको चारैतर्फ हरियाली छ । सामूदायिक वनले घेरिएको रिसोर्टमा हरियालीको कमी छैन । आँखालाई आनन्दित बनाउने हरियालीका माझैमा बसेर हिमाल र तालको दृश्य हेर्नु लोभलाग्दो छ ।
त्यही हरियालीमा रंगिविरंगी चरा आउँछन् । विभिन्न जातका चराको आवाजले विहानीको मधुर सुर्यको प्रकाशमा सुवास छर्छन् ।
रिसोर्टमा भएको बगैँचामा फुलमा पनि विविधता छ । मौरी र भँमराहरु भुन्भुनाई रहन्छन् । त्यतिमात्रै होइन, बालबालिकाका लागि खेल्न र रमाउनका लागि पर्याप्त ठाउँ छ । बगैँचादेखि पार्कमा उनीहरु आरामदायी र सुरक्षित तवरले खेल्न सक्छन् ।
रिसोर्टमा स्वीमिङ पुल छ । जहाँ स्वीमिङमा मसाज, ज्याकुजीको मजा लिँदै हिमाल देख्न सकिन्छ । जसलाई अधिकारीले भाइटालिटी फुल भनेका छन् । जहाँ ३/४ प्रकारका स्वीमिङ सम्बन्धि गतिविधी गर्न पाइन्छ । स्वीमिङ पुलबाट मात्रै होइन, रिसोर्टको साउना कक्षबाट समेत हिमाल हेर्न पाइने व्यवस्था छ । सामान्यतयाः डार्क रुप हुने साउना यहाँ सिसा राखिएको छ जहाँबाट हिमालको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्नल सक्छन् ।
रिसोर्ट तुलनात्मक रुपमा महंगो देखिए पनि यहाँ उपलब्ध सेवा सुविधाका दृष्टिले महंगो लाग्दैन ।
नेपाली र विदेशीका लागि छुट्टछुटट्टै मूल्य दर तोकिएको छ । अधिकारीका अनुसार नेपालीका लागि एक रात बस्न ११ हजार ५ सय र विदेशीका लागि १६ हजार रुपैयाँ लाग्छ । जसमा बस्न, ब्रकेफास्ट र सेवा जोडिएको छ ।
टेस्लाको मोडल ३ को संसारभर किन यतिधेरै प्रतिक्षा भइरहेको छ ?
एजेन्सी । विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाले निकट भविस्यमा नै भारतमा अत्याधुनिक विद्युतीय कार उपलब्ध